Galmudug oo sheegtay inay fogtahay suurta galnimada in la soo daayo dad ku afduuban koonfurta Gaalkacyo iyadoo aan la sii dayn eedaysane PL gacanta ay ku hayso. – Radio Daljir
Galmudug oo sheegtay inay fogtahay suurta galnimada in la soo daayo dad ku afduuban koonfurta Gaalkacyo iyadoo aan la sii dayn eedaysane PL gacanta ay ku hayso.
Febraayo 9, 2013 4:59 b 0
Gaalkacyo, Feb 09- Taliyaha ciidanka maamulka Galmudug Xasan Faarax Kaarshe? oo maanta oo sabtiya waraysi siiyay radio daljir ayaa sheegay in dadkaasi afduuban ay gacanta ku hayaan ehelada nin Puntland ay ku eedaysay inuu ka tirsan yahay Al-shabaab ayna soo bandhigtay hub iyo waxyaabaha qarxa oo ay tilmaamtay inay ku qabteen ninkaasi.
Sargaalkaasi u hadlay Galmudug ayaa gabi ahaanba wax kama jiraan ku tilmaamay in ninkaasi uu ka tirsan yahay Al-shabaab hubkii iyo waxyaabihii lagu qabtayna ay ahaayeen wax la soo maleegay.
Galmudug ayaa dhawr jeer ku celceliyay inuusan ninkaas wax luga ku lahayn Al-shabaab uuna ahaa ganacsade danbi laawaa, waxayna Puntland ugu baaqday inay ninkaas in la soo daayo haddii danbiyada loo haysto ay ku cadyihiin lagu maxkamadaeeyo deegaanka lagu qabtay ee Gaalkacyo.
Kaarshe ayaa meesha ka saaray inay fududaan karto sii daysamada dhibanayaashii muddada ka badan labada bilood ku afduuban koonfurta Gaalkacyo iyadoo aan laga wada hadlin eedaysanah loo haysto inuu abaabulayay falal qorshaysan oo ka dhan ah bulshada ku nool deegaanada Puntland.
M/weynaha Galmudug Gen, Cabdi Xasan Cawaale (Qaybdiid) ayaa dhamaadkii sanadkii hore sheegay inay sida ugu dhakhsiyaha badan ku sii daynayaan dhawr qof oo gacanta ugu jira ehelada eedaysane Puntland ay hayso, balse illaa hada ma muuqdaan dadaalo wax ku oola oo arimahaasi lagu furdaaminayo.
Arimahan oo idil waxay walwal iyo walbahaar u keenayaan qoysaska dadkaas la haysto oo illaa hada aysan u muuqan xal muujinaya inay mar kale si nabad galyaa ugu helayaan dadka ka maqan.
Maxkamada gobolka Nugaal oo maanta dib u dhigtay kiis la xiriira dilkii Xildhibaan Sheybe.